कथा – सहिदकी छोरी | साहित्य संगालो २०१३
कथा – सहिदकी छोरी
बेचयनपुरकी निर्झरीलाई पितृ उत्रन्छ। हल्लाले चारभञ्ज्याङ खायो। निर्झरी २९ वर्षीया एकल महिला हुन्। उनी एकल महिला हुनुको दुर्भाग्य एकल होइन, आमदुर्भाग्य हो। देश, काल, परििस्थति र परम्पराको प्रतिविम्ब हो। यो प्रतिविम्बलाई मात्र कोट्याउनु मूर्खतापूर्ण हुन्छ। किनभने, वस्तु र वास्तविकता कतै पर छ। सुरुसुरुमा निर्झरी काम्दै बर्बराउन थालिन्। गाउँलेले उनलाई बोक्सी भने। घर-परविारले यातना दियो। तर, उनको बेलाबेला काम्ने र बर्बराउने कार्य निरन्तर नै रह्यो।
एक दिन उनलाई ठूलाघरे जिम्मावालको मृतात्मा उत्रियो। जिम्मावाल खसेको त्यस्तै आठ-दस वर्ष मात्रै भएको थियो। जिम्मावालका छोरा-नाति गाउँको सारा सम्पत्ति बेचेर सहर पस्ने तरखर गर्दै थिए। गाउँ छाड्नु केही दिनअघि उनीहरूले गाउँलेलाई भोज खुवाए। भोज खाँदाखाँदै निर्झरीलाई पितृ उत्रियो ‘म ठूलाघरे जिम्मावाल हुँ। आफ्ना सन्तानदेखि म खुसी नै छु। सबैले उन्नति गरेकै छन्। तर, थातथलोलाई यसरी चटक्कै छाडेर जान नहुने थियो। ठीक छ, तिमीहरूको खुसी गर ! शाखा-सन्तानको खुसी नै पितृको खुसी हो। जानुअघि हाम्रा नाममा बर-पीपलको चौतारी बनाएर जानू, हाम्रो आत्मा बिसाउने स्थान होस्। अँ, मैले धेरथोर जालझेल गरी दीनदुःखीका जग्गा-जमिन खाएको थिएँ। उनीहरूलाई नै हकदाबी गर्न लगाएर फिर्ता दिनू। माथि कालिकाको मन्दिरमा पित्तलको मूर्ति छ। त्यहाँको सुनको मूर्ति मैले ल्याएको थिएँ। त्यसलाई तिमीहरूले सहर लगेर बेच्ने कुरा गर्दै छौ। त्यसो नगर ! त्यस मूर्तिलाई कालिकाको मन्दिरमै पुनःस्थापना गर्नू। यति गर्‍यौ भने मेरो आत्माले शान्ति पाउनेछ।’ यसपछि निर्झरीको घरमा पितृ बोलाउन आउनेको घुइँचो लाग्न थाल्यो।
यता, पालुवाटारका शिवशंकर पहाडी चुनाव लड्ने भए। उनका पिता रामभक्त पहाडी प्रधानपञ्च थिए। त्यसैले पनि ०४६ सालको परिवर्तनदेखि नै जिल्ला, क्षेत्रमा शिवशंकरको उत्पातै नेतागिरी चल्छ। शिवशंकर पहाडीको व्यक्तित्व पहाडजस्तै छ। अग्लो कद। लामो कपाल, लामै दाह्री-जुंगा -पहिले कालो, अहिले सेतो)। सानोतिनो सभा/भेलाका लागि माइक नै नचाहिने ठूलो आवाज। साम, दाम, दण्ड, भेदको खेल बुझेका। एक प्रकारले उनी राजसी ठाँटका देखिन्छन्। आफ्नो जिल्ला, क्षेत्र हुँदै सिंहदरबारसम्म छिरेर टेबल ठटाएपछि सानोतिनो बजेट-कार्यक्रम उनको क्षेत्र-पोल्टोमा पुग्नैपर्छ।
दुर्भाग्य भनौँ, उनको पदीय हैसियत गाविस अध्यक्षभन्दा माथि छैन। सांसदका लागि उम्मेदवार हुन पनि पाएका थिएनन्। सांसद बन्ने रहरमा उनले थुप्रै सम्पत्ति सिध्याए। बाबुको देहान्तपछि आमा बिरामी परिन्। नेपाली र भारतीय डाक्टरसम्मले रोग पत्ता नलगाईकनै आमाको पनि निधन भयो, ९० वर्षको उमेरमा। आमालाई सांसद भएर देखाउने उनको रहर अधुरै रह्यो।
विगत १२ वर्षदेखि शिवशंकर बढी नै धार्मिक भएका छन्। मातापिताको चिरशान्तिका लागि उनी हरेक बिहान पूजापाठ गर्छन्। ०६४ सालको संविधानसभा चुनावका लागि पार्टीले शिवशंकरलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्‍यो। तर, उनले मधेसबाट चुनाव लड्नुपथ्र्यो। पहाडीले मधेसबाट चुनाव जित्नु चानचुने कुरा थिएन। पछिल्लो समय मधेसमा एकसे एक स्थानीय नेताको प्रभाव बढ्दो थियो। मधेसी जनताले पनि पहाडी नेताबाट आफूहरूको परविर्तन नहुने बुझेका थिए।
शिवशंकर पहाडीलाई चिन्ता पर्‍यो, चुनाव कसरी जित्ने?
उनकी श्रीमती पार्वतीदेवीले युक्ति दिइन्, ‘हामीले पनि पितृ बोलाएर बुझौँ, उहाँहरूको आत्मालाई कस्तो छ? अनि, यो चुनाव लड्नु उचित छ/छैन? शुभकार्यमा पितृलाई सम्झनु रामै्र हुन्छ।’ ‘कुरा ठीकै हो।’ शिवशंकर पितृ बोलाउन बेचयनपुर पुगे। उनले पहिले आमाको आत्मालाई बोलाउने निर्णय गरे।
निर्झरीलाई पितृ उत्रियो, ‘छोरा ! तैंले हाम्रो आत्मशान्तिका लागि पूजापाठ गर्दै आएको छस्। म तँदेखि खुसी नै छु। आफ्नो थातथलोमा बाटो-घाटो, बिजुली ल्याएको छस्। स्कुल-क्याम्पस खोलेर गाउँको विकास गरेको छस्। सबै राम्रै गरेको छस्। तर, गाउँका कति गरबि, भूमिहीन जनतालाई तैंले गरेको विकास कागलाई पाकेको बेल बनेको छ। उनीहरूलाई बाँच्न झनै कठिन भएको छ। उनीहरूले बोक्ने भारी पनि गाडीले खोसेको छ। उनीहरूले गर्ने काम मेसिनले गर्न थालेको छ। घरदैलोको स्कुल-क्याम्पस पनि उनीहरूलाई बिरानो बनेको छ। अब तैंले चुनाव जितेर ती दीनदुःखी जनतालाई पनि उन्नति पथमा हिँडाउनुपर्छ।’
‘आमा, मैले कसरी चुनाव जित्न सक्छु?’
निर्झरीको जवाफ आयो, ‘पारि दुःखीनगरमा एउटी आमिश्रा नाम गरेकी कन्या छे। त्यस कन्याको बायाँ आँखाबाट झरेको हर्षाश्रु पिउनू, तैँले अवश्य चुनाव जित्नेछस्।’
आमिश्रा सहिद परिवारकी छोरी रहिछन्। पिता सहिद भएपछि उनको परिवार ठूलो दुःखमा परेको रहेछ। शिवशंकरले त्यो सहिद परिवारलाई सहयोग गरे। आमिश्रालाई छात्रावासमा राखेर पढाउने व्यवस्था मिलाए। आमिश्राको रेखदेखका लागि एउटी महिला खटाएका थिए। ती महिलालाई गोप्य निर्देशन थियो, आमिश्राको हर्षाश्रु कुनै भाँडामा संकलन गर्नू।
आमिश्राले धेरैपटक आँसु खसाइन्। देशको अवस्था पनि जनता रुवाउने नै थियो। आमिश्राले हर्ष या विस्मात् कुन अवस्थामा आँसु झारनि् भन्ने ती सुसारेले खुट्याउन सकिनन्। अर्कोतिर, आमिश्राको प्रत्येक आँसु विपक्षी उम्मेदवारलाई बेच्न एउटा गिरोह नै लागेको थियो। धेरै दिन बित्यो। शिवशंकरले आमिश्राको हर्षाश्रु पिउन पाएनन्। उनले शंका गरे। त्यसपछि आमिश्राकी सुसारे महिलालाई नै हटाए। र, नौवर्षे आगम नाम गरेको एक बालकलाई खटाए।
आगम टुहुरो थियो, सहरको सडकबालक। ऊ कहाँबाट सडकमा आइपुग्यो, उसैलाई थाहा थिएन। तर, शिवशंकरलाई थाहा थियो, कुनै पनि काम दीनदुःखी वा असहायले इमानदारीपूर्वक गर्छन्। शिवशंकरले उसलाई सडकबाट उठाएर आगम नाम दिए। गाँस-बास दिए। काम पनि दिए। उसको काम आमिश्रासँगै खेल्नु, आमिश्रा खुसीले रोएका बेला आँसु संकलन गर्नु।
आगम र आमिश्रा सँगै खेल्थे। आगम आमिश्राभन्दा थोरै जेठो थियो। एक दिन आगमले सोध्यो, ‘आमिश्रा, के गर्दा तिमी धेरै खुसी हुन्छ्यौ?’
‘गाउँमा मेरा धेरै साथी छन्। तिनीहरू स्कुल पढ्दैनन्। तिनीहरूसँग खेल्न, पढ्न पाएदेखि म कत्ति खुसी हुन्थेँ,’ आमिश्राले भनिन्।
‘म तिम्रा साथीहरूलाई बोलाउन जान्छु। उनीहरूलाई पनि यहीँ तिमीसँगै पढाउने। उनीहरू यहाँ तिमीसँगै बस्न पाएनन् भने तिमी पनि नबस। घरमा गएर आफ्ना साथीसँग खेल, हाँस !’
आगमका कुराले आमिश्रा निकै खुसी भइन्। उनी उफ्रेर आगमको अँगालोमा बेरिन् र हर्षाश्रु झारनि्। उनको बायाँ आँखाबाट खसेको आँसु आगमको मुखमा पर्‍यो। त्यही दिन आमिश्राका साथी बोलाउन गएको आगम फेरि फर्केन।
सात वर्ष बित्यो।
मधेसमा आफ्नो कुनै जोर नचल्ने देखेपछि शिवशंकरले उम्मेदवारी नै फिर्ता लिएका थिए। उनले आमिश्रालाई पनि घर पठाए। संविधानसभाको चुनाव भयो। तर, संविधान बन्न सकेन। दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गरी संविधान बनाउनका लागि जनता आन्दोलनमा उत्रिए। आन्दोलनकारी युवा नागरकि मञ्चमा गएर परविर्तनका कविता-गीत सुनाउथे, भाषण दिन्थे।
यसैबीच, एक करबि १६ वर्षे बालक मञ्चमा गएर आमिश्राको आँसुको कथा सुनायो। ऊ आगामी चुनाव जित्ने निश्चित भएको नेताजस्तै बोलिरहेको थियो। यही बेला मञ्चमै उसको छातीमा गोली वषिर्यो। आन्दोलनकारी भागाभाग भए।
भोलिपल्ट त्यस युवकको शवलाई नागरकिका तर्फबाट भव्य अभिनन्दन गरियो। रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकादेखि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा युवककै समाचारले स्थान पायो। त्यो पार्थिव शरीर आगमको थियो। आगमको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जलि दिन जनता उर्लिएर आएका थिए। ‘आगमलाई सहिद घोषणा गर्, घटना छानबिन गरी हत्यारालाई कारबाही गर,’ जनताले नाराबाजी गररिहेका थिए।
आगमको शवमाथि श्रद्धाको फूल चढाउन आमिश्रा आइपुगिन्। त्यहाँ आमिश्रालाई कसैले चिनेका थिएनन्। सात वर्षअघि साथी बोलाउन गएको साथी आगमको शव, फूलैफूलले छोपिएको थियो। आमिश्राले आगमको पार्थिव शरीरलाई धेरै बेर हेर्न सकिनन्। आँखा बन्द गरेर श्रद्धाको फूल चढाइन्। र, श्रद्धाञ्जलि दिन आउनेहरूतिर आँखा दौडाइन्। जनसागर उनको आँखामा अटाएन। उनी हर्षले रोइन्। यसपालि भने बायाँ आँखाबाट खसेको आँसु उनकै मुखमा पर्‍यो ।
This entry was posted in Nepali Stories and tagged कथा, सहिदकी छोरी by भण्डारी2013. Bookmark the permalink.